Ummeli waseFlorida Cannabis - UMnu. Cannabis Law - Dustin Robinson
Kuchazwa Imithetho yaseFlorida Marijuana
Yilalele kuPodCast noma ubuke i-YouTube Imithetho yaseFlorida Cannabis Ngommeli othile waseFlorida Cannabis Lawyer esixoxa naye - vakashela UMnu Cannabis Law, uDustin Robinson, kuwebhusayithi yakhe: Mnu Cannabislaw.com
Isimo seFlorida Cannabis / Imithetho ye-Marijuana
"Imithetho yaseFlorida Cannabis" bahlushwa yisibalo sabantu asebekhulile futhi abagcinayo futhi esisabambe isithunzi nje mayelana ne-cannabis, okuthiwa insangu ngokusemthethweni esifundazweni saseFlorida. IFlorida inohlelo lwensangu oluqinile neziguli ezingaba ngu-300,000. Ukuqinisekiswa ngokuphelele kwensangu eFlorida kungenzeka kuqhamuke ohlelweni lokuvota njengoba umthetho wayo wensangu wezokwelapha wavela - funa u-2022 ngevoti yokuthola insangu ngokusemthethweni.
ISIQONDISO ESIQALILE: Ungayiqasha Kanjani Ummeli We-Cannabis Yebhizinisi Lakho
Ngokusho the imithetho yamanje ye-cannabis, ngisho namanani amancane ensangu awekho emthethweni kuleli lizwe. Lezi zikhulu zithi ukuba ne-gramu engu-20 noma ngaphansi kwensangu kuyicala elibi. Le yimithetho yokulawula i-cannabis yamanje.
Lokhu kuzoshintsha kanjani ngokuzayo, futhi sizokwazi yini ukubona ushintsho oluthile emithethweni ye-cannabis yaseFlorida? Okwamanje, singabona umlando wemithetho ye-cannabis eFlorida. Insangu yezokwelapha isemthethweni kuleli, ngenkathi ukusetshenziswa kwezokuzijabulisa kwensangu eFlorida kusaphikiswa umbuzo.
Imiphi Imithetho Ye-Florida Florida Cannabis Manje?
Uma une-gramu ezingama-20 noma ngaphansi kwensangu, ungahlawuliswa inhlawulo ephezulu yama- $ 1,000. Ungathola nesigwebo esiphezulu sonyaka owodwa ejele lezwe. Lolu hlobo lwe-misdemeanor lungathi sína kunegama. Ukuze ufaneleke ukuthola i-felony, kufanele ube nezinsimbi ezingaphezu kuka-20 zensangu.
Imiphumela iba mikhulu uma uthengisa insangu. Lokhu kusebenza ezindaweni ezingamamitha ayi-1,000 10,000 esikole, ikolishi, ipaki, noma enye indawo ebekiwe engajezisiwe. Ungathola inhlawulo ephezulu yama- $ 15 nesigwebo esiphezulu seminyaka engu-XNUMX. Le yimithetho yamanje yokuphathwa kanye nokudilizwa kwensangu eFlorida.
Imithetho ingaphansi kokubuyekezwa okukhulu, ikakhulukazi ngenxa yohlu lwezindleko ezingashintsha imboni yensangu yaseFlorida. Inkantolo Ephakeme yaseFlorida yayingathatha isinqumo sokushintsha imithetho elawula insangu eFlorida ngasekupheleni kuka-2020.
Ngo-2016, ama-70% abavoti eFlorida bakhetha ukuyihlanganisa ngokusemthethweni insangu yezokwelapha njengengxenye yokuchibiyelwa komthethosisekelo. Ekupheleni kuka-2017, insangu yezokwelapha ibhalisiwe ngokusemthethweni njenge-edibles, amaphilisi, i-oyili, ne-vaps. Kwakuyisinyathelo esikhulu kwiziguli zaseFlorida ezazifuna ukusebenzisa insangu yezokwelapha ngezimo zezempilo ezahlukahlukene.
Ukutshala i-hemp eFlorida kwaba yinto ejwayelekile embonini. Lokhu bekuyingxenye yohlelo loMnyango wezoLimo nabathengi kusukela ngonyaka ka-2019. Lokhu kuholele ekutheni lokho okubizwa nge- “green rush” kulesi sifundazwe okwenze ukuthi kube nezinketho eziningi zamabhizinisi amancane naphakathi nendawo.
Manje, ngo-2020, izikweletu ezamenyezelwe zisekela isinyathelo sokusemthethweni insangu eFlorida. Lesi sinyathelo sinabasekeli abaningi abazinikele, futhi umthetho osemthethweni usuzoshintsha ngokuphelele.
Yini Ezoshintsha Emthethweni waseFlorida Cannabis ngo-2020?
Kukhona izibikezelo ezinkulu zokuthi ukusetshenziswa kwezokuzijabulisa kwensangu eFlorida kuzokwenzeka kusuka ngo-2020. Lesi yisimemezelo esivela ezinhlakeni ezisemthethweni zensangu yaseFlorida. Bathi ukusetshenziswa kwezokuzijabulisa kwensangu kungashintsha umbono wonke wemboni.
Izinkampani eziningi zizovula ama-dispensaries nezitolo lapho imikhiqizo ye-cannabis izokwazi ukuthenga. Lokhu kuzonyusa amathuba ebhizinisi kubalimi, abatshali kanye nabathengisi.
Ngasikhathi sinye, phakathi no-2020, ukusetshenziswa kwensangu ngaphansi kwezimo ezingcono kuzotholwa ama-veterans. Abanamalayisense bazokwazi ukukhulisa, ukucubungula, ukuvivinya, kanye nokuthengisa imikhiqizo ngaphandle komphathi. Uhlu olwandisiwe lwezifo luzongezwa ukuze welashwe ngensangu yezokwelapha. Futhi izinhlawulo zamanje zokutholakala nensangu zizophinda zidingidwe yinkantolo.
Lonke lolu shintsho luzoza ngo-2020. Imithetho emisha yaseFlorida yangotshintsho olukhulu kubahlali baseFlorida abafuna ukusebenzisa insangu ngokusemthethweni.
Imithetho yaseFlorida ye-cannabis esemthethweni izoletha ushintsho olukhulu ekubukeni kwensangu okuphelele kulo mbuso. Njengamanje, izingu-11 zithi ngokomthetho insangu kubantu abadala abaneminyaka engaphezu kwengu-21. Insangu isemthethweni ukusetshenziswa kwezokwelapha ezifundweni ezingama-33.
Ngokuzayo, sizobona ukwanda kwesilinganiso sokusetshenziswa kwensangu jikelele. Ikakhulu phakathi kweziguli ezisebenzisa insangu ngezinhloso zokwelapha. Izakhamizi zaseFlorida zizokwazi ukusebenzisa insangu ngezinjongo zokuzijabulisa uma zonke izikweletu zithatha isinyathelo ngo-2020.
IFlorida ivula iminyango yayo yezinguquko ezinkulu embonini yensangu, futhi lo mkhuba uyaqhubeka nokukhula. Ukulima, i-dispensary, kanye nokusatshalaliswa kufanele kulethe amathuba amakhulu amabhizinisi nezinkampani ezincane. Ngokuqiniswa kwensangu eFlorida, sizokwazi futhi ukuyisebenzisa futhi ukuyithenga ngokusemthethweni insangu. Lokhu kuzoba igxathu elikhulu phambili ekuguqukeni kwemithetho ye-cannabis yaseFlorida.
Namuhla sizobe sikhuluma konke ngemithetho ye-cannabis yaseFlorida. Sanibonani nonke, igama lami likaTom Howard. Uma udinga noma yini, ungaba nommeli we-Google Cannabis futhi uzokwazi ukungithola. Kepha namhlanje sinesiqephu esikhetheke kakhulu. Sizobe sikhuluma konke ngemithetho ye-cannabis yaseFlorida noDustin Robinson. Dustin, siyabonga ngokusijoyina.
Ummeli waseFlorida Cannabis - Dustin Robinson
Yebo, uyayazi indlela leyo ndima. Ngenhlanhla senza kangcono kakhulu kunangaphambili. Noma kunjalo, yilokho okwenzekayo uma unogu lolwandle ukubonisa. Uvelaphi u-Dustin?
Ngilapha eFlorida. NgiseSouth Florida enelanga. Isimo sezulu esihle lapha.
Ngakho-ke awugqoki amabhulukwe afakwe ngotshani njengoba ngilapha ngoba kufana namadigri angama-25 ngaphandle.
Yebo, cha, kuhle. Bengiphume ngesikebhe izolo. Namuhla usuku lomsebenzi. Ilanga elihle liqonde ngqo efasiteleni.
Hlobo luni lwezinto osebenza kuzo eFlorida insangu?
Kwenzekani ngemithetho yaseFlorida Cannabis
Sinezinto eziningi ezahlukahlukene ezenzeka lapha eFlorida, kusobala ukuthi akubali ukuthi leyo nto iqhubeka ohlangothini lwe-hemp. Sinezinto eziningi ngasohlangothini lwensangu. Umlando nje osheshayo lapha eFlorida. Saselayisense eminingana, esikubiza ngokuthi Ama-MMTC ezansi lapha, Izikhungo Zokwelapha i-Marijuana Medical. Lawo amalayisense ahlanganiswe ngokuqondile lapha eFlorida. Babenamalayisense eMnyangweni Wezempilo. Futhi-ke emva kwalokho kube nezingqinamba eziningana lapha eFlorida. Ngakho-ke manje njengamanje sinamalayisense angama-22 futhi inqwaba yalawo malayisense anikezwa ngezivumelwano zokuxazululwa, ngaphandle kwe- [crosstalk 00:01:47], usho lokho futhi.
Kuyathakazelisa, ngoba lapha e-Illinois bacabanga ukuthi kumele babeke kanjani isabelomali sokumangalela umbuso futhi banamalayisense angeziwe enhlobo eyakhelwe phezulu ngokomthetho. Ngakho-ke ngiyazibuza ukuthi ngabe izivumelwano eziningi zokuxazulula izokwenzelwa amalayisense?
Yebo, kunjalo, ngingasho ukuthi noma yimuphi umbuso owenza noma iliphi ilayisense udinga ukwaba izinsizakusebenza ezinkulu okumele zibambe. Ngiyazi iMissouri isanda kumemezela abawinile. Bengisebenza namaqembu ambalwa kwizicelo zaseMissouri kanye nababhali bezicelo ezinhle, lapho sebeyibhala, bayayiqopha ukuze bakwazi ukuzibeka bazokwazi ukuletha imbangela yokwenza okuthile ngezinga abalifinyelela ngalo ungatholi ilayisense. Ngakho-ke lelo isu elisetshenziswa ngabantu abaningi. Futhi lapha eFlorida amalayisense ayebaluleke kakhulu. Ngiqonde ukuthi sine-
ukuhlanganiswa okumile kwebhizinisi laseFlorida Cannabis
Yebo. Ngakho-ke uzothola… Ucezu lwephepha lalithengisa ngama- $ 60 million. Yikho, akukho mali ethengiswayo, akukho imisebenzi. Ngakho-ke kuningi emugqeni, abantu abanandaba nokukhokha ama- $ 1 ezigidi kuma-ada abameli ukuzama ukuthola leyo layisense yama- $ 50 ezigidi. Ngenkathi kwamanye amazwe, inani lelayisense kungenzeka lingabi ngaphezulu. Uma unenani lephepha, ake sithi, ama- $ 500,000 noma isigidi, ungahle uthambekele ekuthini ungakhokheleli igqwetha elingamakhulu ambalwa amambuka ngalo. Kepha uma amalayisense ebiza izigidi ezingama-50, unjengokuthi, "Uyazi, ngizothatha isinqumo sami." Futhi kwesinye isikhathi abanye abantu baxhasa ngemali leyo mbumbulu ebona amathuba-
Bamba kancane. Futhi akukhona lokho… Cha, lokho akuyona ubuqiniso. Kuyini lapho, linda… ubuqhawe obunganqobayo futhi ngeshwa kuzofanele sifunde amanye amagama asemthethweni we-arcane. Ngakho-ke abantu bebenjalo, awuvunyelwe ukwenza lokho. Ngokusemthethweni into, ubuqhawe kanye nokugcinwa. Yebo, emcabangweni wokuthi awukwazi ukwenza i-Champerty kufana nokugxambukela kweqembu elikude ukukhuthaza icala. Well lokho ukugcinwa lokhu. Kodwa empeleni uhlobo olufanayo lwento lapho omunye umuntu okungeyena umuntu ohlobene necala onentshisekelo ngezezimali kuyo. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi bavumela ubuqhawe eFlorida?
Empeleni ngangingakaze ngizwe lokho. Kepha ngiqonde ukuthi, ekugcineni kosuku, kuvame ukuthi kube nezikhathi lapho abantu benamacala khona futhi bengakwazi ukubakhokhela imali bese kuthi abanye abantu bangene bezokweletela icala okuthile. Ngakho-ke yebo, ngicabanga ukuthi into yobunqobeli kungenzeka ukuthi igxile kulokhu-
O, kusukela ezikhathini zobudokotela-
Kepha ngakho-ke ucabanga ukuthi kungaba khona okungalungile uma uzophuma futhi uzama ukuthola abantu abazokufaka icala? Lokho mhlawumbe yilokho okuhloswe ngakho, kepha lesi yisibonelo lapho abantu babefuna ukufaka icala. Babengenayo imali yokusebenzisa imali eyi- $ 1 miliyoni kuyo. Ngakho-ke bangena bathola abatshalizimali ababezimisele ukuxhasa ngezimali icala lokushintshana nabanye ngenani elithile. Futhi-ke bathola ilayisense futhi bakwazile ukuyiphonsa ngama- $ 55, amaRandi ayizigidi ezingama-60. Ngokusobala manje bakhiphe… Muva nje bakhiphe amalayisense amasha ayisishiyagalombili ngokukhokha imali. Babizwa ngokuthi izinkomba eyodwa. Lawa ngabantu abathola amaphuzu ngaphakathi kwephuzu elilodwa kwinqubo yokufaka yesicelo sokuqala. Ngakho-ke njengamanje sinamalayisense ayisishiyagalombili kwabangu-22 abasha kakhulu futhi bazama ukukhulisa imali ukuze basebenzise inkampani ehlanganiswe iqonde. [crosstalk 00:05:08] Kubiza cishe izigidi ezingama- $ 20.
Lapho usho mpo, usho ukuthi bayakhula, ukuthi bayakugcina, abakwenzayo, konke kukodwa, akunjalo? Futhi yileso isakhiwo seFlorida.
Yebo, ngakho-ke okuxakayo eFlorida kufanele babe nakho, kufanele bakhule, bacubungule, bakhiphe futhi bakhiphe. Futhi awukwazi ukukhokha noma ikuphi kwalokhu. Ngakho-ke akufani nokuthi kukhona izinkampani zokulethwa ezenza ukulethwa. Ibhizinisi ngalinye ngalinye linenkonzo yalo yokulethwa. Futhi ungacabanga ukuthi lokho kuba ngukungasebenzi kahle uma unabanye omakhelwane ababili eduze komunye nomunye. Eyodwa iya-oda isuka kwenye i-dispensary, enye iya-oda isuka kwenye i-dispensary futhi unezimoto ezimbili ezishayela ukuhambisa eduze. Kungakuqonda ngokwengeziwe uma ngabe kunenkonzo yokulethwa ekwazi ukuqoqa kuzo zombili lezo zinkampani emotweni eyodwa. Futhi ngakho-ke kukhona ukungasebenzi okuthile futhi kukhona izikweletu ezimbalwa kulesi seshini somthetho esilandelayo futhi bezama ukuthola. Kukhona inkantolo Ephakeme yaseFlorida, ngakho izinkantolo eziphansi empeleni zithathe leso sakhiwo njengephikisana nomthethosisekelo wethu waseFlorida.
Yini le eyenziwe yiFlorida, ngoba ake sixoxe ngokuthi uFlorida waba kanjani umbuso wensangu wezokwelapha.
I-Florida Medical Marijuana Began yaqala kanjani
Okokuqala eFlorida saba nomthetho okuyinto ngokuyisisekelo nje, insangu ephansi kakhulu ye-THC-
Kwazwakala kakhulu njengeWest Virginia. Besikhuluma emuva, West Virginia, awukwazi ukuthola imbali, awukwazi ngisho nokuthola umphunga, akukho lutho olubhemayo futhi kufanele ucubungule. Ingabe leyo ndlela i-Florida yaqala? Ubungavunyelwe ukuba nezimbali?
Yebo. Ngakho-ke, eFlorida, empeleni ngisebenza kuhlelo lokusebenza lwase West Virginia manje futhi yebo, yindlela i-West Virginia ebukeka ngayo. Futhi yebo, i-Florida yaqala kuphela ngemithamo elula kakhulu, elula. Kepha esivele saqhamuka nakho, bekukhona ukuchibiyelwa komthethosisekelo. Ukuchitshiyelwa koMthethosisekelo ngokuyisisekelo kusho ukuthi la ma-MMTC, Izikhungo Zokwelapha i-Medical Marijuana zingakhula, zisebenze, zidlulise noma zilethe. Ngakho-ke yayinalelo gama noma kumthethosisekelo wethu waseFlorida. Kwathi ngo-2017 lapho isishayamthetho siyokhipha leso sichibiyelo sombuso, basibiza ngokuthi… Basho ukuthi sikhule, sisebenza, sadlala futhi sikhipha, empeleni sakha le nhlangano ehlanganiswe ngokuqondile okufanele yenziwe bonke.
Umehluko phakathi kokuhlangana nokuphoqelekile ngokuqhathanisa nokuvumayo. Enye yazo ihlangana futhi enye yona, angiqiniseki ukuthi bayibiza ini.
Imithetho yokuhlanganisa / yokujikisa kanye neFlorida Marijuana Imithetho
Yebo, ngibuzwa okuningi ngaleli cala lasenkantolo [neududible 00:07:38] nokufana nomuntu, “Ah, kuyinkimbinkimbi kakhulu. Angidingi ukwazi izinto zomthetho. ” Nginjengokuthi, “Cha, kulula kakhulu. Umehluko phakathi kuka-no no. Umthethosisekelo usebenzisa igama noma okusho ukuthi ungalima, ulusebenzise, ​​ulunikeze noma ululethe. Isimangaliso saseFlorida size sisebenzisa igama futhi, okusho ukuthi inhlangano idinga ukwenza zonke lezo zinto ngokuyisisekelo. ” Ngakho-ke manje inkantolo Ephakeme yaseFlorida ithatha lelo cala futhi zonke izinkomba zikhomba kubo eziqinisekisa ukuthi leso sinqumo, okuyosho ukuthi ukuhlanganiswa okuqondile kuzophulwa futhi kuzodingeka babuye bazokwakha isakhiwo esizwakalayo lapha.
Kungahlangana kokuphikisanayo nokujezisa. Ngakho-ke i-conjunctiva futhi, futhi ukujikisa kuyinto noma. Cha ngiyayithanda. Lokhu kufana, ngoba kusisekelo sayo. Sikhuluma ngomthetho we-cannabis kusuka kumbono wezomthetho ngokungafani nombono wenqubomgomo. Kepha kunenqubomgomo eningi eqhubeka kulezo zingxoxo. Futhi njengaseFlorida noma e-Illinois, sizoba nezingxabano zomthetho futhi ulwa nencazelo yegama futhi, noma ngiqonde lokho. Futhi uma bethi, “Noma,” kufanele kube kuleso simo lapho. Futhi ngokuyihlanganisa ngokweqile bese futhi ngokwakha kwamanye ama- $ 100,000, ama- $ 250,000 wokumangalela umbuso ukuze ukwazi ukukhokhela ilayisense. Lokho kubeke inani lentengo yelayisense le-cannabis, hhayi nje kuphela esifundazweni saseFlorida, kodwa noma kuphi lapho iphakeme kakhulu kunendlela obekufanele ibe yiyo noma ibingaba yiyo.
Yebo, yebo, yebo. Amalayisense aphezulu kakhulu futhi ngokweqiniso, umnyango wezempilo usebenzisa amathani imali ukwenza lokhu futhi abanazo izinsiza kusebenza. Futhi kususa kusuka kwisabelomali sabo ukuphoqelela ukuhlinzekelwa kwangempela okuhlinzekelwa yi-MMTC. Futhi ngakho-ke empeleni akukho ukuphoqelela okuningi okufanele kube khona, ngoba i-DoH empeleni ayinazo izinsiza kusebenza.
Akukona. Ukuqonda kwami ​​ukuthi kunabadlali abane kuphela eFlorida. Kuyiqiniso lokho? Njengokungaki
Ilayisense yaseFlorida Marijuana Yangempela
Ngakho-ke ukulayisensa kwasekuqaleni bekufana, ngicabanga ukuthi banamalayisense abadlali abane noma abahlanu. Ngakho labo bantu baba nesihloko esikhulu emakethe. Bese kuthi emva kwalokho babe nelayisense, futhi manje sesinamalayisense angama-22. Njengamanje kukhona cishe eziyisishiyagalombili noma eziyisishiyagalolunye ezisebenza ngempela. Kulaba abayisishiyagalombili noma abayisishiyagalolunye, abane noma abahlanu babo bayabusa impela, ngoba babenekhanda elikhulu.
Ngakho-ke akukho cap, ngakho-ke i-dispensary kanye nesimiso, bathi bakhiwe kuma-dispensary angama-25. Ngakho-ke bekungekona nje kuphela ukuthi bakhule, basebenze futhi babeke, futhi ngokungafani nase-Illinois lapho benzelwe usayizi wobukhulu bemisebenzi yabo kumamitha skwele angama-5,000. EFlorida, awukho emaphepheni akhulayo. Awukhethiwe ekuqhubekeni kwakho. Futhi ukusabalalisa, ukhawulelwe ezindaweni ezingama-25. Kepha uma usufika e… Njengoba sifika ku… Njalo uma iziguli eziyi-100,000, uthola ezinye izinkampani ezinhlanu. Ngakho-ke manje sesingaphezu kweziguli ezingama-300,000. Ngakho-ke ngayinye yalezi zinto ezihlanganisiwe zibhekwe ngokweqile zingaba nama-25 ngokuhlanganisa ngokuyisisekelo cishe nama-40 izabelo
Futhi bekukhona futhi amacala athile avumela abanye balabo banamalayisense ukuthi bavule ngisho nezindawo eziningi. Ngakho-ke, yingakho babhekisa kubo ukuthi amalayisense amakhulu. Futhi kubiza isamba esikhulu semali ukungakhuli nje, hhayi inqubo kuphela, kepha futhi nokuzama ukuvula zonke lezi zindawo ezisabalalisa, kanjalo.
Kubukeka sengathi isimo saseFlorida sanikeza abantu abane ithuba. Okwesine-
Kwakungebona abantu abane, kwakungamadoda amane aseFlorida. Futhi-ke kwakungeyona labo bantu abane. Akufani nokuthi kunabafana abane abahleli bezungeza, abahleli kwizigidi ezingama-20 umuntu ngamunye futhi bonke bayaphonsa. Lokhu bekufanele kube izinhlangano ezihlangene zibeke imali eningi nethalente eliningi emgwaqweni, ngoba uma kungenjalo wena ' ngeke sikwazi ukukhulisa ngokushesha lokho.
Hhayi-ke, ngiqonde ngisho ukulungisa lokho, hhayi ngisho amadoda aseFlorida. Futhi yilokho abantu abaningi eFlorida bacasulwa ngakho ukuthi amalayisense anikezwa abalimi lapha eFlorida futhi kunezidingo ezithile ukuthi babeqhuba i-nursery iminyaka engama-30. Kepha kwesokudla lapho sebethole leyo layisense bathengiselwe ama-MSO amakhulu. Ngakho-ke njengamanje, Florida, wonke amalayisense okusetshenzwa nawo aphethwe ama-MSO amaningi kakhulu angenalutho. Akuwona amadoda aseFlorida, akubona abantu baseFlorida. Azizona ngisho nezinkampani zaseFlorida. Kumane kungamabhizinisi amakhulu. Kepha uyazi, ekuvikelweni komlimi, abantu abaningi banika laba balimi isizungu esikhulu sokuthengisa la malayisense. Kepha iqiniso liwukuthi, ukuthi njengoba ibhange liba nzima njengoba linjalo futhi lihlanganiswa futhi libiza kakhulu ukusebenza, laba balimi, abanye babo bangaba abalimi abacebile, bangaba nesigidi esisodwa noma ezimbili, banikela Nginezigidi ezingama-20.
Ngakho-ke abanakho nhlobo ukukhetha. Abakwazi ukuya ebhange ukuyothola imalimboleko. Abanayo enye indlela ngaphandle kokuyithengisa ukuze ilingane. Futhi yilokho abakwenzile. Ngakho-ke, angicabangi ukuthi yiphutha lomlimi lelo. Ngicabanga ukuthi lonke uhlelo lwalunephutha elincane. Kepha uyazi ukuthi, ekugcineni kosuku uhlelo olusha futhi ngicabanga ukuthi iFlorida empeleni yenza umsebenzi omuhle. Ngicabanga ukuthi ukuhlanganiswa mpo kusize ngezinkinga eziningi ezahlukahlukene. Kepha ngicabanga ukuthi sisezingeni lapho kufanele sishintshe khona.
Ngabe uyacabanga ukuthi… ngiqonde ukuthi, ngoba uma bengaguquki ngaphezu kwehholo noma bakunikeze ithuba elithe xaxa labobantu, labo bantu abane bazovele babukele abatshali abahle bese bezithenga. Ngiqonde ukuthi, empeleni, bazoba, uma kungekho cap, ngoba lapha eWashington sinaso-
Ngakho-ke ngokuyisisekelo okushoyo, akufani nase-Illinois lapho sinalezi zingqimba eziphathelene nokulawulwa kwelayisense ukuze kungabikho muntu ongabusa imboni. EFlorida kubukeka sengathi, futhi kuzwakala sengathi eWashington unenkinga engafani ngqo lapho unabadlali abathile abakhulu abahlanganisa inqwaba yalokho okwenzekayo. Futhi-ke nje akunakwenzeka ukuthi ungene kumdlalo.
Yebo. Futhi nje ukuthi kucace, eFlorida akekho umuntu ongaba nentshisekelo engaphezu kwe-5% kwilayisense eyodwa. Ngakho-ke akufani nokuthi unga ... Unenkampani eyodwa eFlorida ungathenga enye ilayisense. Kepha yebo, ngiqonde ukuthi alikho ngempela isicephu.
Cha, amalayisense kufanele ahlukane. Ngakho-ke asikho isizathu sokuthi bahlangane ngaphansi kwelayisense elilodwa. Ngiqonde ukuthi ilayisense inenani elibiza u- $ 50 wezigidi. Ngakho-ke kungani ungazihlanganisa zibe ilayisense elilodwa uma unenani elingaka? Ngakho-ke, ngiqonde ukuthi ubona abanye abanjengoMedMen, bavele balala phansi lapha. Ngiyazi ukuthi babenezinhlelo ezinkulu zama-dispensaries abo futhi baqala inqwaba yabantu. Futhi iningi labo, abakwaMedMen nabakwaSurterra bebexhasa uhla lwezimali lapha bezolungiselela ukuzilibazisa, futhi babeka imali enkulu kakhulu, futhi kusobala ukuthi babebheja kwezokuzijabulisa ukuze bangene-
Kwenzekani ngokomthetho kwezokungcebeleka eFlorida ngo-2020?
Impela. Ngakho-ke kunamaqembu amabili alawula iFlorida bese kuba nesicelo se-MILF. Ngakho-ke lawula i-Florida ngempela isiqalile ekuseni kakhulu. Inkinga yabo ukuthi bebengatholi uxhaso lwabamalayisense angama-22, ngakho-ke babengenayo imali yokuthola abasayinile. Udinga amasiginesha angaphezu kuka-700,000 ukuze uwathole ekuvotweni lapha eFlorida. Futhi basukuma bangaphezulu kwezinkulungwane eziyikhulu, kwafika ekubuyekezweni kwenkantolo eNkulu, okwakukuhle ukuthi bakwazile ukufika kulelo phuzu. Kepha kwabe sekufika i-MILF futhi baxhaswe yiMedMen kanye neSurterra futhi abantu abaningi bacasulwa yilolo limi kulolo sicelo. Bengicasukile ngoba ngifuna bonke abantu basebenzisane. Kuyakhathaza kakhulu ukuthi silwa nomunye ukube sonke besingahlangana.
Ngakho-ke manje uneRegate Florida enezisiginesha ezingama-100,000. Unama-MILFS anama-signature ayizinkulungwane eziyikhulu. Isikhathi besiphawula, ngokuyisisekelo bekufanele babe nenani elithile ngoFebhuwari, babengeke balishaye. Ngakho-ke bakhothama ngokuyisisekelo. Ngakho-ke ngeshwa, babenethuba lokuhlangana futhi ngicabanga ukuthi uma behlangene ngabe sayibona isemthethweni. Indaba enkulu ukukhula ekhaya. Ngiyazi ukuthi usanda kukhuluma ekuqaleni kombukiso wokuthi uzama ukulwa nekhaya lasekhaya. Uhlu lwezikhalazo lwe-MILF alunalutho lapho oluphathelene nokukhula ekhaya, ukulawula iFlorida.
Manje usho lesi sikhalazo se-MILF, usuyikululile yini uhla lwezikhalazo lwe-MILF? Ngoba ngizwa i-MILF futhi nginjengokuthi, "Ngicabanga ukuthi lokho bekufanele kube nokuthola amasiginesha amaningi, ikakhulukazi eFlorida." Kusho ukuthini lokho?
I-MLF Marijuana Legalization Florida
Uyazi, ngikubiza ngokuthi isikhalazo se-MILF. Kungumbuzo omuhle.
Kungumthetho insangu eFlorida. [crosstalk 00:15:50] Kepha iqiniso lokuthi ushilo u-MILF, obekufanele ukuba yi-freaking yabo, kufanele ngabe bayithengisile emva kwalokho, ngoba [crosstalk 00:15:59] -
Futhi usuthole, usubalile konke. Yebo, kepha kepha lolu uhlobo lwenkinga lapho ufana, "Kulungile, ngakho-ke unezi zinyathelo ezimbili zokuncintisana [inaudible 00:16:08] bese usuvele, uwenze kanzima umsebenzi wakho kabili. Futhi-ke futhi, ingabe ikhaya lalikhula lizonikezwa iziguli zezokwelapha noma esinye sazo? Noma yini inkinga yokukhula kwasekhaya eyahlukaniswa enye kwenye?
Ngakho-ke iRegate yaseFlorida ngempela kwakuwukunyakazisa utshani komuntu wansuku zonke empeleni, okuyiqiniso nje elifuna insangu esemthethweni. Ukunyakaza kwe-MILF kuxhaswe yiMedMen kanye neSurterra futhi kwaba inzuzo yabo ukuthi bangafaki lutho oluhlobene nokukhula kwasekhaya. Vele bazophikisana nokuthi bebezithulele maqondana nokukhula ekhaya futhi bazoyishiya kumshayamthetho futhi babenezizathu zabo zokushiya ikhaya bekhula kulo. Bathe lokhu kuzokwenza ukuthi kube nzima ukwenza izichibiyelo zomthethosisekelo futhi ukuthola izichibiyelo zomthethosisekelo ufuna ukukugcina kulula futhi bafuna ukukugcina, kufana nokuthi isicelo se-MILF silula, sifushane kakhulu. Ukulawula isikhalazo seFlorida bekude kakhulu kunenqwaba yemininingwane kuyo, ngakho-
Umbuzo enganginawo ngeFlorida futhi neWashington State ufana nayo futhi [inaudible 00: 17: 11] akunjalo. Ngicabanga ukuthi kungumbuzo wengxenye ezimbili. Okokuqala, ingabe isishayamthetho eFlorida empeleni singasenza isenzo sabo ndawonye futhi sihlanganise umthetho? Ngoba uma ukhuluma ngohlelo lokuvota, lokhu kuzoba yingxenye yesibili. Ubeka okufanele kuchitshiyelwe umthethosisekelo kulokho futhi kuvame ukufushane kakhulu. Ngubani ohumusha lokho, futhi enze imithetho ukuze empeleni ibe yi-rubric yomthetho efana nalena noma esiyidingayo nge-cannabis njengemboni?
Yebo. Ngakho-ke njengamanje uSenator uJeff Brandes wakhipha i-Senate Bill 1860 esetshenziselwa abantu abadala, empeleni esigcawini sokugcina sendlu yomthetho uMichael Grieco, empeleni wakhipha nomthethosivivinywa wokuzijabulisa. Ubekwazi ukuthi akukhona, ngingabangani noMichael, ungitshele ukuthi empeleni akunalo ihlazo. Kepha ubefuna ukuthumela umyalezo, "Sawubona, lesi yinto okungenani esifuna ukuba nayo njengengxenye yengxoxo ngonyaka odlule." Ngakho-ke kulo nyaka uJeff Brandes wafaka lo mthethosivivinywa ngo-1860. Ngiyayeseka. Kukhona, ngiyazi sakhuluma kakhulu mayelana nezingxenye zokulingana kwezenhlalo ze-Illinois. Inengxenye, ivumela ukwanda kwezinto zobugebengu. Ngakho-ke ngokwezinga elithile kukhona ingxenye ethile yokulingana kwezenhlalo lapho-
Kepha akunikezeli noma yimaphi amaphuzu ukuthi abafake izicelo babe nokuboshwa kwe-cannabis noma yini.
Ngqo, yebo. Ngiqonde e-Illinois, njengoba wazi, uthola amaphuzu angama-20% uma usebenza nomuntu onobunikazi nokulawula kwaleyo bhizinisi. Futhi ngakho inani elikhulu lamaphuzu. Ngakho-ke noma ngubani ongafaki isicelo sokulingana kwezenhlalo muhle kakhulu, abanalo ithuba. Ngakho-ke abazange babele amaphuzu. Kunjalo-
Ubhekene nokudlala, kuyinhlangano enamalayisense yokuncintisana.
Yebo, futhi iqiniso liqiniso ukuthi ngesishayamthetho sethu esilondoloziwe njengamanje, kunethuba elincane kakhulu elingadlulela esishayamthetho. Kungenzeka kakhulu ngokuchitshiyelwa komthethosisekelo. Kepha uyazi ukuthi, kulo mkhakha, awusoze wazi. Uyazi-ke, ngiyathemba. Ngokusobala ngigcina umkhondo wokuhamba kwalomthethosivivinywa. Bahleli emhlanganweni manje ngakho bayahlangana futhi bakhuluma ngakho.
Cishe ngeke igcine ngendlela yokuthi okwamanje. Kuzodlula ngokubuyekezwa okuhlukahlukene okuningana ngezinga elenza ngalo futhi kuvunyelwe. Kepha yithuba elihle. Futhi yini ethakazelisa kakhulu ngayo nayo, into enkulu eFlorida ukuhlanganiswa okumile. Abavunyelwe ukwenza noma yini inkontileka. Ngakho-ke kusuka ekukhuleni, kusetshenziswaneni, kusatshalaliswa, ngeke bakwazi ukuthola izinkontileka zangempela.
Umthethosivivinywa weSenethi we-1860 ubavumela ngokusobala ukuthi banikeze izinkontileka ezinye zalezo. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi kuzoba khona abahlinzeka ngezinsizakalo manje abangangena futhi basebenzisane nalezi zinkampani ezinelayisense. Ngakho-ke abantu abaningi badinga ukuqonda ukuthi ngezinga abafuna ukwenza ngalo izinto zokuhamba, kuzoba namathuba ezinkampani ezizokwenza ukuthutha insangu futhi okwamanje azitholakali lapha eFlorida njengamanje.
Ukhulume ukuthi ungusopolitiki ozivumelayo, futhi uma ngicabanga iFlorida, ngicabanga ukuthi abantu asebekhulile ne-Conservatism nayo yonke imali ezansi lapho. Bengihlala eJersey, ngakho-ke ngijwayelene nalowomqondo wabantu futhi yini. Ngabe ucabanga njengomhlali ukuthi yini futhi njengomuntu obuke ipolitiki yakho, ngabe kuningi okudingayo okuvela kwiBig Pharma? Ngiqonde ukuthi, kwenzeka kanjani ukuthi abantu abaningi bangafinyeleli inani lakho labantu abadala lokuvota, ngoba lowo muntu ongaqondile, ngiqonde ukuthi, senza insangu ukuthi ihambisane. Akunjalo, kunjengamafutha. Kungcono kunotshwala. Kufana nokuthi ekugcineni lapho sifika emthethweni esizifunayo sonke, kuzoba, ungayithenga njenge-broccoli, akunjalo? Njengephawundi ngamasenti angama-50, ngoba abantu abaningi bayanda.
Masidwebe umugqa ku-vodka, njengamakhadi we- [inaudible 00:21:09]. Kuzoba imboni ebizayo futhi. Kepha ungangena kukho.
Bheka, uma ubheka ezingeni likahulumeni, uzobona ukuthi womabili amaqembu aqala ukuhlangana kulolu daba. Futhi ngicabanga ukuthi uqala ukubona lokho eFlorida, futhi ubona lokho emazweni amaningi ahlukahlukene. Ngakho-ke ngicabanga ngokomlando, ngokusobala kube yizixazululi eziye… Futhi bheka, anginayo into emelene nokugcinwa kwemvelo. Empeleni, ngingumuntu ozinakekela ngokwami, ngivota ezindabeni. Kepha kule nkinga ethile, bakhathele kakhulu, kepha iningi labo selishintshile. Ngikhulumile nabaningi bezishayamthetho eziguqukayo, futhi abangamakholwa. Baye bakhuluma kwezinye zezidala zakudala esinazo eFlorida. Baye baqonda izinzuzo zokwelapha. Abanye odokotela engisebenza nabo benze ukuthi amazwi abo azwakale eTallahassee esifundazweni sethu iCapitol,
Ngabe ucabanga ukuthi umyalezo we… ngiyaxolisa, ucabanga ukuthi yimuphi osebenza kakhulu nabantu baseFlorida mayelana nemithetho yensangu? Umyalezo wokuthi ulunge kanjani, umuthi osebenzayo, noma umyalezo wokuthi ibhizinisi elihle. Ngoba uma ngicabanga iFlorida, ngicabanga ukuthi kuyakhuthaza, kepha ngicabanga ukuthi, “Yebo, kepha balondoloze ibhizinisi. Bayakhathalela abakwenzayo. Banendaba nenani labo. ”
Yebo yingakho noma yimuphi umyalezo ozama ukuwuhambisa, ubheke, esikoleni somthetho uhlala ufundiswa kufanele wazi ukuthi izethameli zakho zingobani. Futhi into eyodwa engiyiyona kakhulu ... ngihlala ngazi ukuthi izethameli zami zingobani. Kufanele wazi uma ukhuluma ne-elulaton versa umuntu ofundile, umuntu oqonda ezezimali, umuntu ongayiqondi imali. Kufanele uqonde ukuthi ukhuluma nobani. Futhi yebo, izinto ezivumelana nabantu abalondolozekayo ukuthi le yinto yokwenza imali. Kunamathuba amaningi lapha. Amadola amaningi wentela ebesingathola, vele asifuni ukwenza amaphutha enziwa yiCalifornia namanye ala mazwe ngokukhokha intela kakhulu.
Kepha kunamathuba amaningi ebhizinisi engicabanga ukuthi ahlangana namaqembu okulondolozwa kancane. Kepha kubuye kuhlale kubalulekile ukukhuluma ngokukhubazeka okuthile. Futhi enye inselelo phezulu lapha omasipala abaningi abavimbela empeleni ama-dispensary's abavunyelwe kusimo sethu sombuso. Ngakho-ke ngenze umsebenzi omningi ezingeni lendawo, ngifundisa ezinye zezikhulu zendawo ukuthi kungani kungafanele zivimbe. Futhi kusobala lokho okuningi kusekelwe kunhlamba. Kufundisa umphakathi nje futhi kuzanywa-
Insangu kanye nomphumela we-NIMBY, okungeyona imiphumela yami yangemuva.
Kepha ake sifundise umphakathi njengamanje kanye nami njengomphakathi, ngoba ngivela e-Illinois lapho singavunyelwe ukwenza imizamo yokuvota ukuchibiyela umthetho-sisekelo wethu. Ngabe uthatha kanjani lokho kuchitshiyelwa okuncane, okuncane abakubeka lapho futhi bakha indwangu ephelele yesitimela yokufaka umthetho kubandakanya imithetho yezokuphatha ukuze ukwazi ukunikeza ilayisense nokulawula imboni ye-cannabis? Noma imboni yensangu eFlorida?
Yebo, konke kuqala ngesicelo, ngakho-ke kufanele usilobe uhlu lwezikhalazo, futhi njengoba ngishilo, incwadi yezikhalazo yaseRegate Florida yayide. Futhi empeleni uma udlula kulokho, ngicabanga ukuthi udinga amasiginesha angaphezu kuka-90,000. Inkantolo Ephakeme ibe isenza ukubukeza ngokwezimali bese ibukeza lolu limi, futhi nolimi lokuchitshiyelwa komthethosisekelo kudingeka lusobala ngokwedlulele futhi kudingeka ukuthi kukhulunywe isihloko esisodwa. Akufanele umboze izihloko eziningi. Uyazi-ke, uma usudlulile lokho kubuyekezwa kweNkantolo Ephakeme, uthola amasiginesha evotini, udinga ukuthola amasiginesha angama-766,000 noma into enjalo.
Bese kuba kuvoti, kufanele uvotele lokho. Lapho-ke abomthetho kufanele bangene futhi kufanele babe ne- [inaudible 00: 24]] isimiso esivumelana nalowo mthetho sisekelo. Futhi yilokho lelo cala leNkantolo eNkulu yaseFlorida ukuthi lelo lowomthetho wangena kuphi. Futhi kusobala ukuthi uMthethosisekelo waseFlorida uphakeme ngaphezu kwesimo saseFlorida. Futhi uma kunokungqubuzana phakathi kwesivumelwano saseFlorida nomthethosisekelo waseFlorida, kuba khona impikiswano nokuthi lesi simiso sithathwa njengesingahambisani noMthethosisekelo. Futhi yileso simo esikuso njengamanje.
Kuyenzeka, futhi sekuyisikhathi eside ngilokhu ngivela ogwini lwase-East. Ngabe ikhefu lasentwasahlobo liyinto ngaphezulu lapho ndoda? Njengokufana Daytona nakho konke lokhu okusalokhu kuyinto?
Impela. Ngihlala ebhishi laseFort Lauderdale ngakho-ke woza isikhathi sikaMashi, kuyahlanya lapha. Ngizama ukungabi kude nolwandle ngaleso sikhathi.
Ngakho-ke, bheka, impikiswano okufanele yenziwe lapha kulo mzuzu, akunjalo? Ngoba ngiyakhumbula, futhi ngiqonde ukuthi shit yasendle yenzeka.
Shit yasendle. Futhi kushukunyiswa umnikazi kaJimmy Buffett uSunterra noma iSurterra, ukuthi enye yezinkampani ukuthi… Ngakho-ke uBuffett unesenzo esithile emakethe yaseFlorida cannabis.
Yebo, ukubandakanyeka kukaSurterra, futhi ngizokutshela, ngebhishi, elinye lamaDeerfield, ngikhulume emhlanganweni wokuzwa weDeerfield lapho babefuna ukunqabela izisebenzi zensangu nokuthi yini eyabakhanga kakhulu lapho iMedMen ithenga indawo ebhishi . Futhi abakwaMedMen, bayazijabulisa, ukugxila kwabo, uma ubabheka bezentengiso-
Yebo, kungukudlala kwe-cannabis yokudlala kwezokuzijabulisa, ngakho-ke babecabanga ukuthi, “O, iminyaka emihlanu kusukela manje sonke sizoba nezikhala, sizobe silalela i-reggae, kuzoba kuhle.
Ebhishi, kujabulile eDeerfield Beach. Futhi lokho kwasabisa ukuqothuka kwabantu baseDerfield. Futhi empeleni bagcina ukwenza ukuvinjwa ngemuva kweqiniso. Ngakho-ke i-MedMen yabe isithola indawo yayo, kodwa empeleni bayakuvimbela. Futhi empeleni ngicabanga ukuthi leso sinqumo empeleni sasihlukile kulokho abavunyelwe ukukwenza ngaphansi kwesimemezelo saseFlorida. Isimo seFlorida asibavumeli ukubeka ... Uma bevumela ama-expensaries insangu, ngeke bakwazi ukubeka cap. Futhi engikholwa ukuthi kwenzeke uma ufunda amaminithi alokho kulalelwa esimisweni saseDeerfield, futhi lokhu kwenzeka kubo bonke omasipala abahlukahlukene, empeleni isisekelo sabo sokufuna ukuvimba ama-dispensaries ukuthi babecabanga ukuthi sebenele ngabo.
Ngakho-ke uma ngabe lesi simiso singakuvumeli ukuthi ubeke isicephu ekugcineni endaweni enanini lama-dispensaries, kungani uvunyelwe ukuvumela amanye ama-dispensaries bese uthi, "Kulungile, sinokwanele, manje sizokwenqabela . ” Empeleni kungokwakheka kwesimo. Substantively benza into efanayo. Ngakho-ke uma iMMTC ibifuna ukulwa nokuvinjelwa, ngicabanga ukuthi bazoba necala elihle.
Kubukeka kungenangqondo kimi eFlorida kuzo zonke izindawo ukuthi laba sopolitiki abazivikela ukuvimbela insangu ebhishi. Zonke izimo ezimbi engikukhumbulayo ngisakhula ezenzeka eFlorida noma e-Atlanta noma kuzo zonke izinto ezimbi, okungenani imikhosi ngezikhathi zentwasahlobo kwakubuswa utshwala. Ngabe kufanele ube nokushiswa okubi okungaphezulu edolobheni lakho eligcwele utshwala ngaphambi kokuthi uthi, "Kulungile, ake sinikeze ukhula olubi" ithuba.
Ngenkathi uPhish enza iBigypress ukukhala ngonyaka omusha, futhi angiqonde ukuthi, "Hawu, nkosi yami, kunekhonsathi yamaPishi ethatha amahora ayisikhombisa olwandle, indlela eya kubaphathi bamatekisi eFlorida." Cha, ngiqonde, kodwa lokho kucwasana yindoda yangempela. Futhi lokho kugcwala kuyandile. Futhi-ke uma kulapho abantu bethatha umhlalaphansi, nakho kuyahambelana nobudala. Ngakho-ke ngiqonde ukuthi lokho kunga-
Kodwa ngiqonde ukuthi, uyabona kwenzeka.
Futhi-ke ngakho-ke nge-Silver Tuna Tour yakhe, empeleni ulapho ezama ukuya emaphandleni ukuyochitha leso sihlava, kodwa-
Kepha ubona okungokoqobo-
Futhi ngisho nalokho kugcwala kuyaqhubeka. Ngiqala ukungasuki kakhulu esihlokweni, kepha ngiyaqala ukubamba iqhaza kakhulu enhlanganweni yama-mushroom ye-psilocybin futhi empeleni ngikwethule inzuzo yami engenzi inzuzo nje ngesonto eledlule. Sizoza newebhusayithi yethu ngoFebhuwari, kepha imali yethu engenzi inzuzo igxile ekusetshenzisweni kocwaningo lwezokwelapha nangokomoya ukushayela izinguquko zomthetho zamakhowe e-psilocybin eFlorida. Futhi sesivele senze igumbi elibalulekile kuyo. Kepha inselelo futhi yisihlava.
Yinto efanayo nakwi-cannabis, kufanele unqobe ukucwaswa futhi washo ngokwakho, utshwala, unabantu abaphuza kakhulu futhi ababulawa utshwala-
[inaudible 00:28:52] izinkulungwane kulo nyaka.
… Akekho umuntu ofayo ngokubhema insangu futhi akekho ofayo ngokuthatha amakhowe e-psilocybin. Manje bangenza izinqumo ezithile ezimbi futhi ngicabanga ukuthi yingakho ngithi kudingeka siguqule ngokomthetho. Abantu abaningi bayithatha ngaphansi kwesilungiselelo esithile mhlawumbe. Ngakho-ke abantu bahambe phambi kwezimoto eziningi
I-psilocybin amakhowe & Legalization of Marijuana
Kulungile, kepha ngoba yi-glu ye-hallucinate, kepha kubonakala sengathi inezokwelapha. Kodwa-ke, futhi angikaze ngifikelwe yikho, futhi ngaphambi kokuba siphendukele emuva emithethweni yensangu yaseFlorida, empeleni ngamafuphi, yini i-psilocybin ehlelwe ngaphansi koMthetho Okulawulwayo Wezinto?
I-Psilocybin ibinomlando omude kusiko lethu. Futhi okuhehayo ukuthi kuyahlehla, ubheka izizwe, zonke izizwe ezinkulu abasazenza futhi ezinye zazo empeleni zivunyelwe ukuthatha izinto ezifana ne-Ayahuasca Burner ngezizathu ezingokomoya nezinto ezinjalo. Kepha ucwaningo selwenziwe. Futhi empeleni ukuthi ngingene kanjani kukho, engicabanga ukuthi kuyajabulisa ngempela cishe, kungewona wonke amakhasimende ami, kepha inani elikhulu lamakhasimende wami we-cannabis babenesifiso esikhulu sokuthola i-psilocybin futhi babenesifiso sokubeka imali enkulu, ukukhulisa imali enkulu nokuqala ukwenza izinto ezithile, noma ngabe kuseJamaica. UDenver usanda kukwenza njengecala. I-Oakland isuswe ekuhlangeni, empeleni iChicago inobuhlanga. IVermont inenkokhelo. U-Oregon unaso isikhalazo soMthethosisekelo.
Futhi ngakho-ke bengithola leyo mibuzo. Futhi-ke ngokweqiniso impela angizange ngibe nentshisekelo leyo, ngoba ngacabanga ukuthi kwakufana nohlaya. Mina angizange ngithathe i-psychedelics. Ngakho-ke empeleni ngikhulume nabanye odokotela engibamele futhi ngakhuluma ngodokotela abayisikhombisa kuya kwabali-10, nezandla phansi, wonke umuntu wabo wayengamakholwa amakhulu enanini lezokwelapha. Ngakho-ke ngaqala ukwenza olwami ucwaningo futhi ngaqala ukukhuluma nabanye abatshali kanye nabelaphi eJamaica. Ukukhuluma nodokotela bezengqondo besiza ezansi lapha abasebenzisa i-ketamine, abanye odokotela bami abaphatha izinhlungu abasebenzisa i-ketamine. Futhi ngikholwa kakhulu kunani lezokwelapha manje lama-amakhowe e-psilocybin ukwedlula engikwenzayo nge-cannabis. Ubufakazi abanabo bukhulu. Futhi i-FDA isiqala ukubuyela emuva. Ngakho-ke empeleni kusuka kumbono we-FDA owemukeleka ngokwedlula i-cannabis.
Kepha ukhuluma njenge-dosing ye-micro, ngisho nange-shrooms. Ngiyazi umfana lapha, uzobabeka emaphaketheni futhi ngiqonde ukuthi, ngiyakhumbula ngiseyingane, ukuba yindoda yasekolishi, ungathatha umbhangqwana, ngikwenzile kube mnandi. Lokhu kuzoba ubusuku obuhle, ngoba ngithathe okuningi. Futhi kuyazuzisa ngomuthi. Ngiqonde ukuthi ukhuluma izinto ze-naturopathic. Konke kungasisiza, akunjalo? Noma i-tumeric nayo yonke le nto ethile, konke-
Yebo, into eyodwa engicabanga ukuthi ibaluleke ngempela. Noma nini lapho ngixoxa ngohambo lomunye umuntu kumakhowe e-psilocybin, bonke bakhuluma cishe ngendlela yezinkondlo njengoba nazi, bahlanganyela ucezwana lwesikhumba sabo noma bonke laba banobunye [ne-inaudible 00:31:49]. Uma ucabanga ngezinto ezintathu eziyinhloko abafuna ukuzelapha ngamakhowe e-psilocybin ukucindezelwa, i-PTSD kanye nomlutha. Futhi uma ucabanga ngempela ngokuthi ziyini zonke lezi zinto ezintathu, kukhona okwenzekayo engqondweni, kunokuvela okuthile. Okuthile akukho lapho. Futhi okwenziwa amakhowe e-psilocybin, kuvumela wena ukuthi uvele nje uchithe lokho futhi uvule ingqondo yakho futhi uthole umbono obanzi futhi usethe kabusha umqondo wakho. Futhi yilokho abakwenzayo eJamaica. Kunezikhungo eziningi zokwelapha laphaya ozohamba kuzo futhi wenza ukubuyiselwa izinsuku eziyisikhombisa nokunye nokunye nokunye [crosstalk 00:32:23] -
Ngiyazi ukuthi ngenzani ngemuva kokuphela kwesizini yethu lapha ngoMashi-
Kepha uyazi, kuyamukeleka ukuthi uthathe iphilisi ethi fucking ikwenza ukuba ukhululeke njenge-Xanax futhi yini ephikisana nephilisi, uhlobo lwalesi sibalo samakhowe-
Noma eyodwa ebizwa nge-SSRI, leyo ilungile, kepha kodwa ngicabanga ukuthi ukwenziwa kwemthetho kwe-cannabis eFlorida, Illinois, Seattle. Futhi-ke kubukeka njengokuchithwa noma ushintsho kumthethonqubo we-psilocybin kuhlobene ngandlela thile ngomqondo wokuthi izindlela esazisebenzisa ngekhulu lama-20 lokulawula le mishanguzo beziwubuphukuphuku nje futhi bungalungile. Futhi kusiphathe kabi njengomphakathi ngoba kudale isimo sokukhathazeka kakhulu, impilo ethambekele kakhudlwana. Futhi empeleni babeyokukhuthaza lokho. Ngiqonde ukuthi uyakhumbula emuva kuma-50s lapho babebhema iFlintstones ebhema ugwayi kuthelevishini, beyithengisa ezinganeni. Futhi manje kufanele ulwe nokubandlululwa okwadalwa yilelo khulu leminyaka ukuthuthuka futhi ufane, “Cha, bheka lolu cwaningo lwezokwelapha. Kungani singenzi lokhu? ”
Futhi yini ehehayo, bengikhuluma nabameli kulo lonke izwe elihola le nhlangano. Abathile abanjengoNowa Potter, oku-Psychedelic Law Blog kusukela ngawo-90s, ngiqonde ukuthi lo mfowethu uletha inani elikhulu lemininingwane ephathelene nama-psychedelics nezinhlaka zezomthetho nezinto ezinjalo. Kepha okuhlaba umxhwele ukuzama ukuthola ukuthi ngabe ngubani onecala, futhi empeleni ngisebenzisa igama elithi ukubhekelelwa, uhlaka lwezomthetho oluzokwazi ukuthi lukhona. Bekungeke kufane ne-cannabis, futhi kunesikole sokucabanga nezishoshovu eziningi ukuthi abakholelwa ukuthi kufanele kube uhlaka lwezokwelapha. Ngoba uma ubhekene nohlaka lwezokwelapha, futhi ngike ngaxoxa noNowa Potter ngalokhu isikhathi eside futhi une-blog enhle maqondana nalesi sihloko.
Kepha uma ukhuluma ngezokwelapha, kungenzeka ukuthi unesimo esifanelekile, ngakho-ke uvunyelwe ukukwenza ngokwezokwelapha. Noma uma ungenasimo esifanelekile, uyisigebengu futhi njengeselelesi awuvunyelwe ukukwenza. Futhi indlela uNowa azizwa ngayo kanye nabanye abammeli abaningi engikhulume nabo ukuthi kunokubaluleka okungaphezulu kakhulu kwezokwelapha kumakhowe e-psilocybin, ngokwesibonelo ngokomoya. Futhi yingakho imali engenzi inzuzo yami isebenzisa ezokwelapha kanye nocwaningo lokomoya ukwenza ushintsho kwezomthetho olusebenzayo.
Lokho bekuhlala kungikhathaza kakhulu mayelana nokuhamba kwe-cannabis ukuthi babehlala befaka i-kibosh kumaLungelo okuchibiyela okuqala. Uma umuntu ethi, "Cha, ngikholelwa ku-cannabis ngenxa yezizathu ezingokomoya futhi kuyilungelo lami ukuqhuba inkolo yami ngendlela engifuna ukwenza ngayo." Babesathi, “Nah.”
Futhi kuwo womabili ama-cannabis namakhowe, kuyinkinga yokuqina. Ngoba ngiqonde ukuthi, abantu bayayihlukumeza kepha ngakolunye uhlangothi abantu bangayithatha kakhulu futhi impilo yabo ibe ngcono ngayo. Senze ubugebengu, iMelika ihlushwa yilokho engingathanda ukukucabanga kufana ne-Distrter's Daughter Syndrome, akunjalo? Umcindezele konke futhi wamgcina egumbini elincane yonke impilo yakho futhi manje, "Ah, shit, sonke sesinamahloni ngoba ngikhohlwe ukukufundisa ukwenza izinto ngendlela efanele." Ikhofi iyisidakamizwa, i-caffeine ezimpilweni zethu zansuku zonke-
Akuyona yini indlela okwakuvame ngayo, futhi, isizathu sokuthi angikaze ngingene kumakhowe, ngoba ngikwenzile isikhashana futhi banginika ukushaywa kanye namaphaphu ngasikhathi sinye. Indlela esabekayo yokuqalisa. Kepha uyazi, ... kwenzeka. Futhi-ke, futhi, futhi, futhi, kusengithole uhlobo lwamabhola okuhamba, hhayi lelo zinga, kepha kwakuyisikhathi sokutshala imali futhi. Ukusuka kulokho engikubuke kukho, awunayo yini njengama-shaman afanele ukuholwa kulokhu…
Futhi ngizokutshela, kunabafana lapha eMiami abakwenzayo. Ngikhulumile nabo ukuthi empeleni bangama-shamans lapha lapha abahola abantu kuloluhambo olungokomoya. Kukhona namaqembu lapha lapha aqala ukubuyela emuva eJamaica lapho kusemthethweni ngokuphelele. Ngakho-ke, kakhulu, lokho abakhuluma kakhulu ngakho kusethi yakho nesethingi yakho. Udinga ukuthi uqiniseke lapho ethi isethi, unenhloso efanelekile yokukuthola, futhi kufanele ube nokuhlelwa okuyikho.
Ngoba imizwa yakho idonswa ngandlela thile. Ngakho-ke uma usesimweni esabekayo esizungeze abantu ongabethembi futhi ongabathandi, uzoba nohambo olwesabekayo. Futhi okuphambene nalokho. Uma usesimweni esihle lapho uphakathi kwabantu obakhathalelayo futhi abakukhathalelayo nabakufunayo. Futhi yilokho umsebenzi we-shaman, empeleni ukukuholela ohambweni.
Futhi ngiyakuzonda lokhu. Kuyahlekisa engikuzwa sengathi, eminyakeni emibili edlule ngabe angikaze ngikhulume kanjena. Angikho neze i-hippie noma enye into enjalo. Kepha uyazi-
Ukufinyeleleka kwesikhalo sikaMarijuana kuFlorida Cannabis Laws
Cha, lamaqiniso nje. Ngokweqiniso ama-hippies a [inaudible 00:36:48] sonke isikhathi.
Kodwa akulona iqiniso lelo, ngoba njengamanje ubhekene nesihlava esilwa naso ngesikhathi sangempela. Ngoba bengingacabangi lokhu eminyakeni emibili edlule futhi abantu baveza ukuthi, “Bheka, ukubekwa kwami ​​icala bekungibekelwe mina futhi manje sengedlule kulokho. Ngabe sengibona ukuthi kwakuyinkabi nje. ” Kodwa [crosstalk 00:37:05] wemisebenzi esebenzayo ku-stigma isebenza indoda.
Ngezidakamizwa, ingabe ungabiza ingokomoya, kungaba nge-cannabis noma amakhowe. Kubuye kube yi-psychology, kunjalo? Ingokomoya, Psychology. Ingqondo yethu inempilo. Sikhuluma ngempilo yengqondo, futhi yilokho okungokomoya nako. Kufana nalapho unempilo efanelekile yengqondo kanye nombono wokuthi unjani, "Uyazi ukuthi, noma ngabe uyidlalela i-PTSD noma ngokomzimba, kubuhlungu bangempela, usengasebenza njengomuntu. Futhi abantu baphila ngaphandle kwalokhu kwaziswa. Baphila ngaphandle kwalowo muzwa wokuhle. Ngoba besaba ukuyithatha ngoba ayikho emthethweni.
Futhi yingakho ngicabanga, kumayelana nokuba nesibopho. Ngicabanga ukuthi kudingeka sisebenze njengomphakathi. Kumele sibhekane nemithetho yethu futhi kumele sizibophezele. Futhi uyazi, uma udla izidakamizwa ngokunganaki noma unezimiso ezingaphenduli futhi uvele uhlukane ngaphandle kwemithetho, angiyikho lokho.
Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi sibe nalezi zingxoxo. Senza ucwaningo esidinga ukuthi silwenze, futhi sinezingxoxo ezakhayo esingazenza… Ngizobe ngithembekile, angazi uqobo lwami ukuthi uhlelo lwezomthetho kufanele lube yini. Futhi yingakho imali yami engenzi inzuzo, angizukuya ngqo ezikweni manje. Engizama ukukwenza ukuqwashisa, hhayi umphakathi kuphela, owami. Ngoba ngifuna ukuthola uhlaka lwezomthetho olufanele futhi kunezinye izindawo ezifana, bheka uKevin ngaphandle eDenver, ngakhuluma naye. Wenze umsebenzi omuhle ekuholeni iDenver, wathi akhulume nabesilisa e-Oakland. Ngikhulumile nabantu impela ezweni lonke futhi benze umsebenzi omkhulu.
Kepha manje kimina uqobo, angizizwa kahle ngokubeka imithetho ethile ngize ngikhulise ulwazi lwami uqobo nokuthi lokho engizama ukukwenza ukuqwashisa amaFloridians phakathi kwezwe, phakathi komhlaba nami uqobo futhi ukuze sikwazi ukuza nesixazululo esifanele lapha maqondana nemigomo yawo.
Yebo, kunzima. Sigqugquzela njengesitshalo noma into bese kuba uhlobo lokuthi, “Sawubona zingane, qhubekani nibheme ukhula, kepha angifuni ukuba nesibopho sezingane eziphuphayo noma ngabe ubani, ngangingafisi. batshele ukubhema ukhula. Ngiyazi ukuthi akunangozi, anginikezi i-fuck. Kufana nabo… Kepha-
Ngingumphakamisi wokuba nobuncane beminyaka. Ngicabanga ukuthi ukube ngabe ngithathe lezi zidakamizwa ngiseyingane, ngicabanga ukuthi, ubuchopho bakho angicabangi ukuthi bukhule ngokwanele. Kepha njengomuntu osekhulile, uma uthatha lezi zidakamizwa ngenhloso ethile, ngabe ngabe yi-MDMA, kunobufakazi obuningi be-MDMA busiza nge-PTSD, amakhowe e-psilocybin, konke lokhu kuyizigaba ngaphakathi kwe-psychedelics. Futhi uma usumdala futhi ubathatha ngenhloso efanele nangokuqonda okuyikho, ngikholwa ngokweqiniso ukuthi bebengaba ngabezokwelapha. Kepha uma le mishanguzo ihlukunyezwa, nayo ingaba yingozi kakhulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi simane sibe nengxoxo.
Kunjalo-ke ngemithetho ye-cannabis eFlorida noma kunoma yisiphi isimo, ucela abantu ukuthi bathathe isizathu, ulwazi oluzimele, umbono oqondile ngodaba oluyinkimbinkimbi abazizwa ngandlela thile kulo. Kulula kakhulu komunye umuntu ukuthi athi, “Cha, angikuxhasi. Angifuni lutho. ” Ngoba-ke akudingeki ukuthi benze okuthile okuzobenza bazizwe sengathi kufanele babuze noma yini, noma kufanele bashintshe into engakaze ibekhona ngaphambili.
Ngakho-ke uthola le mithetho emisha ye-cannabis eFlorida lapho kufanele ube nezigidi ezingama- $ 50 noma e-Illinois lapho kungama-4,000 izicelo zamalayisense angama-75. Uyazi ukuthi abantu bazomangalela izwe lase-Illinois futhi bazame ukukhokhela ilayisense. Futhi okungenani lobu buhlungu obukhulayo obukhona bukhona kithi busebenza kule nqubo yokuqiniseka ukuthi sinoshintsho olusemthethweni. Kodwa ngiqonde ukuthi, kuyedelela nje ukuthi kulula nje. Into elula ukuthi, "Akunjalo, zibophe bonke."
Futhi empeleni, yilolo hlobo lokufana okwenziwa omasipala lapha eFlorida. Banelungelo ngaphansi komthetho wethu wokuvimbela ama-dispensaries. Ngakho-ke iningi labo lithi, "Asifuni ukuqhamuka nokuthi uhlelo lwezomthetho kufanele lube yini emthethweni wethu. Kulula kakhulu ngathi ukuthi sibe no-liner owodwa othi, 'Bavinjelwe ngokulandela i-Florida Statute 381.986.' ”Boom, siqedile. Akudingeki sikhathazeke ngakho. Vumela abanye omasipala bakuthole. Zizoba ilaboratri yokuhlolwa. Uma sebekwenzile abakwenzayo, sizocubungula, sibukeze. Okuyikho ngempela ukuthi kwenzekani manje ukuthi labo abanye omasipala abanjenge federalism bavumela amazwe ukuthi abe yi-laboratories yokuhlolwa-
Ngakho-ke kuhle. Manje sesingakhuluma nge-States Act. Ngicabanga ukuthi kwephula iSichibiyelo se-14. Ngabe ucabangani nge-States Act?
Ngiqonde ukuthi, i-States Act inolimi oluningi oluhle kuyo, inolimi olubi oluningi kuyo. Ngithanda ukuthi ingxoxo okungenani iya phambili kuhlobo oluthile lukahulumeni wobumbano okungenani luhlonipha umthetho wezwe ngezinga elithile. Futhi empeleni ukuthi yini abantu abangaqondi mayelana noMthetho Wezwe, empeleni kuhlanganisa ukusekela ubumbano empeleni futhi kuvumela iMelika ukuba ibe yi-laboratories yokuhlolwa. Nginelukuluku lokuzwa ukuthi yini ukuhlaziya kwakho kuze kube kungani
Ngoba-ke kuthatha umthetho wobumbano futhi inhlobo yama plugs emithethweni yombuso. Ngakho-ke manje uphatha abantu ababumbene ngaphansi kwerubriki ehlukile yombuso ngakho-ke uma ngise-Indiana, ngiyisigebengu, kepha uma ngingu-Illinois ngokuziphatha okufanayo, ngiyindoda ekhululekile. Futhi ngakho-ke kubeka lesi simo senceku, uhlobo lwenkinga yamahhala. Yebo akusona isimo sobugqila, kuyizelelesi zobugebengu, kepha uma ungafaka umuntu icala, ungazenza isigqila ngokuya ngeSichibiyelo se-13. Ngakho-ke kwakha umthetho we-federal ongalingani umfaniswano ophatha abantu ngokwehlukile kusisekelo ababhekene naso ngesenzo esifanayo.
[inaudible 00:42:48] kunjalo, ngoba angisiye lo mfeli wommeli, ngichwepheshe nje lapha. Ngakho-ke kufana nentela yombuso iyona ethi, "Kulungile, ngamunye wethu uzokwenza into yethu," njengokufaka ngokusemthethweni kwe-cannabis. Futhi eminye imikhuba ayinayo futhi ihlala isemthethweni ngokungemthetho ngokuphelele. Ngokuya ngalolo daba, zingaki ezinye izindaba ezinjengalezo eziseMelika kodwa?
Sonke singavuma ukuthi kubi kwe-fucking kubi, kepha asikwazi ukuvuma ukuthi lesi sitshalo se-benign kufanele sibe… Yinkinga leyo. Izenzo zoMbuso ngicabanga ukuthi ziyinto enhle, ngoba uma kuneminye imibuzo ekujuleni komphakathi wethu ukuthi zizokhubekisa. Kunemibuzo okufanele siyibuze, kepha lo mbuzo usuphenduliwe. Sidinga ukuthi i-fucking ikhule, yenze izinto zibe semthethweni ngokwezinga elithile, sifundisane, njengoba sonke sazi ukuphuza ngokweqile akukubi, futhi kuzokwenzeka [crosstalk 00:43:38]. Kepha uzo-
Ngicabanga ukuthi yini ebalulekile ukuqonda ukuthi uma ucabanga ngezinkampani ezinkulu, kunzima kakhulu kubo ukwenza izinqumo. Bathatha isikhathi eside. Banebhodi yabaqondisi, banamasheya okufanele baphendule kuwo, uma ukhuluma ngezinkampani ezincane, bangathatha izinqumo ngokushesha. Kuyafana kakhulu nezindawo eziphikisana nohulumeni wobumbano. Uhulumeni federal uwumkhumbi omkhulu ozama ukwenza ithuba futhi awakwazi ukwenza ukujika okugcwele ngokushesha njengoba izwe lingaphenduka.
Futhi ngakho-ke bazama ukuthatha lezi zinyathelo zezingane futhi bashayisana bezungeze impikiswano bese bethola okuthile okuphonswe phambili futhi kancane kancane kodwa ngokuqinisekile nginesiqiniseko sokuthi kuzoba nokulahlwa kwalokhu kwenqatshelwa kwe-cannabis. Umkhumbi nje mkhulu futhi kunzima kakhulu ukuhambisa.
Yebo. Kepha mingaki eminye imibuzo yokuziphatha lapha ngaphandle enjengale? Akukho engingacabanga ngakho.
Kungakho ngenza umthetho we-cannabis, ngoba uhlukile kakhulu futhi uhlukile kakhulu. Kungaleso sizathu abafana abanjengami noThomas ngicabanga ukuthi… Kubalulekile uma ngitshela abantu uma ufuna ukuzama ukuqala inkampani ye-cannabis futhi ungahlangani nommeli owaziyo ngempela ukuthi benzani nge-cannabis, uzogijimela kuzo zonke izinhlobo zokubopha, ngoba akufani neminye imboni. Abantu bangakuqhathanisa notshwala kwezinye zalezi zindawo zokuzijabulisa, akubona utshwala. Kujule kakhulu.
Ingabe nina niyazi elinye elinye lommeli we-cannabis obelokhu engxoxweni muva nje ezindabeni?
Ngempela. Indoda emele-
Parnof. Ngeke ngikwazi manje, lo mfowethu, ngiqonde, futhi uKeith Stroup usanda kuthumela i-imeyili kubo bonke abeluleki bezomthetho abajwayelekile ngaye, kodwa ngicabanga ukuthi ungummeli wokuvikela ubugebengu ngomqondo wokuthi uyayithanda insangu neselelesi sakhe. amaklayenti ngokuzwakalayo, kodwa angicabangi ukuthi bakubiza ngokuzwakalayo esikoleni sezomthetho. Ngicabanga ukuthi bayibiza ngentshiseko, kodwa noma kunjalo yebo, angikwazi ukukhumbula igama lakhe, kepha ungummeli wobelelesi
URoddy. Ngicabanga iqiniso lokuthi yena [eleudible 00:45:38] ngokwakhe ukulwela isimilo sensangu ezinkantolo, kodwa ngasikhathi sinye wabe esekhetha ukusiza lo mlisa obekade ephonswa lapho, njengezindaba zezwe . Yebo yebo, yimali, kepha-
Bheka bese uyathanda ukuthi yiyo leyo nto. Uma ekhokha leyo mali ayitholile, ngokungafanele avela e-Ukraine ayikhokhele uSly noma noma yini igama lakhe, abese eyiyisa ebhange lakhe bese eyifaka. Abamkhiphi ngaphandle ngoba uyi-2 MRB. Manje, uma ngizama ukwenza lokho kwinkampani yami yezomthetho, ngoba iklayenti lami lingikhokhela u-50 omuhle, lingikhokhela kahle u- $ 100,000 ukuze liye enkantolo yezwe lase-Illinois ukuze ngikwazi ukuthola ilayisense. Ibhange lami lingangivalela phansi, ngoba bayoba ngathi, “Cha, lokho kwehlukile uyabona, uma uvikela umuntu othile ngecala, kulungile. Kepha uma uvikela umuntu ukuthi wephule ubugebengu, uyi-2 MRB. ”
Yebo, yebo. Ngiqonde, ngicabanga ukuthi lokho kungumahluko engicabanga ukuthi njengabameli esikhaleni se-cannabis empeleni kusho ukuthi ngoba ngobuchwepheshe uma… Sivikela isigebengu, uvunyelwe ukuvikela isigebengu. Kepha kufinyelela lapho insangu ingekho emthethweni ngokwezimali, uma uzama ukwenza ukuthengiselana nge-cannabis futhi wenza isivumelwano seM & A, wenza isivumelwano sokuthengiswa kwezakhiwo, noma ngabe kungaba yini-
Lokho kufana nokuthola ubugebengu obuhluke ngokuphelele kuhulumeni lapho.
Ukuqonda, isidingo sabesilisa bakho, ukubaluleka kwabafana bakho. UTom nokwakho uDustin kuze kube sohlangothini lwebhizinisi lezinto, kufana nendlela eMelika esingaphetha ngayo ngebhizinisi, futhi siyisizwe sethu. Kunjani thina, izinkontileka zakho nokuthi yini. Akufani-
Yebo, iMelika emgogodleni wayo yisivumelwano. [inaudible 00: 47]] umthethosisekelo, ngakho-ke njengeMelika yazala lo mbono wobumbano. Ngabona ukuthi ungalandela umkhondo ezinkampanini ubuyela emuva kwiDutch East India Company. Kepha lokho bekungelamaDashi, njengoba nazi, kusuka embonweni wezwe oyinhlangano engaphansi kwebhizinisi evumela ukuthi ezinye izinkampani nezinye izinkontileka zisebenze. Namanje iMelika ayifani nelinye izwe elake labakhona.
Yebo. Futhi ukujikeleza emuva kulokho ebesikhuluma ngakho ngombuso [inaudible 00:47:49], manje ezinye zithi kuzoba yicala kanti ezinye izifundazwe ngeke kube yicala. Kwakha zonke izinhlobo zokudideka. Esingakaze sikubone embonini yisimo lapho lawa ma-MSO, ama-Multi-state Opharetha esebenza khona. Kufanele babe namalebula ahlukene nama-SOP ahlukile kuzo zonke izifundazwe abazithobela. Akusebenzi kahle ngokwedlulele. Kungakho ngibambe iqhaza kakhulu ku-ASTM D37 okuyimigangatho yokuhwebelana kwembulunga yonke kwemboni ye-cannabis. Futhi size sibe nezindinganiso zomhlaba zokuthi kufanele sivivinye imikhiqizo yethu kanjani, kufanele ibhalwe kanjani, kufanele ifakelwe kanjani, nokuthi kufanele ilahlwe kanjani.
Kuze kube yilapho sesinezindlela ezijwayelekile zokwenza izinto, imboni izoqhubeka ingasebenzi kahle kakhulu, futhi izindleko zokwenza ibhizinisi kulezi zinkampani ze-cannabis zizobe ziphezulu kakhulu. Futhi yingakho ngicabanga ukuthi amanye ala amanani entengo obona kuma-plummet engiqonde kuwo ngenxa yezizathu eziningi. Kepha enye yazo ilungile, akekho noyedwa owayengabona kusengaphambili ukuthi izindleko ezedlula zonke ziya ngokulandela isimo sisuka esifundeni siye kwesinye. Awukwazi ukuthi, "Hawu lawa amalebula wethu futhi yile ndlela esizowathengisa ngayo yonke indawo." Cha, umbuso ngamunye uma uyi-MSO, udinga ukuba nawo wonke umbuso unelebuli yawo bese uqagela ini? Kungcono uhlale ngaphezulu kwanoma yiziphi izinguquko ezingokomthetho maqondana naleyo malebula ngoba umthetho ushintsha ngokushesha esifundeni ngasinye. Ngakho-ke ungahambi uyothenga amalebula ayi-100,000 ngoba ungazigcinela wena ipeni ezimbalwa ngoba zingashintsha ngosuku olulandelayo. Ngakho-ke kunezinselele ezimbalwa nje.
Cha. Ngoba isimo ngasinye siyinto yaso. Futhi-ke kufanele ube ne-chain chain futhi ne-supply chain isesimweni ngesifundazwe uqobo. Ngoba wonke umkhiqizo kufanele ukhule usesimweni esithile. Ngakho-ke awungeke uthole noma imiphi iminxa yezomnotho ukukala kusuka ekubeni opharetha bezikhathi ezithile njengalokhu ongakwenza kulama-MSO. Kepha-ke ongakuthola kuyizindleko eziphakeme zokwenza ibhizinisi, ngoba futhi lapho nje umuntu othile ethola ukuthi usemdlalo we-cannabis, kufanele ubhekane nayo yonke imali futhi bagaqe izintengo zakho ngoba bacabanga ukuthi wenza imali anikeze isibhakela.
Futhi besikhuluma emuva kwesibalo ngezinamba ezithile zabatshali kanye nokuthi bangalahla uhlobo luni lokuphuma kwemali. Yebo, yibhizinisi lokugeleza kwemali, kepha yimali eyinkunzi nebhizinisi elingene kakhulu. Ngakho-ke ngoba ingafinyelela ukugcwala okuningi, akusho ukuthi akubizi kakhulu ukukwenza uma uthola ilungelo lokukwenza. Futhi zonke lezi zinto zidala izinkinga.
Kepha enye yezinto okufanele sizihlanganyele kuyo yonke le minyaka eyishumi ezayo yikhodi yokuthengisa insangu, noma ikhodi yokuhweba ye-cannabis, noma okufana nalokho lapho uthatha khona bese wenza zifane nezakho. Ngoba izofana nanoma yimuphi omunye umthetho, njenge-ERA nje isifikile kuleso simo sama-38. Kwaphasiswa ngeminyaka yama-70s, kunjalo. Kepha ke-ke besinakho lokho, ngicabanga ukuthi bekunguMthetho wama-25 ophasiswe ngo-1789. Kepha kwathatha iminyaka embalwa edlule ngaphambi kokuba kufakwe amakhodi. Angazi, angisiye isazi soMthethosisekelo, angikaze ngibe yisazi sezomthethosisekelo.
Isikole sezomthetho ngangingcono kakhulu emthethweni wezomthethosisekelo kunendlela engiyiyo manje.
Yebo. Ngoba empeleni, bekufanelekile empilweni yakho ngaleso sikhathi. Kepha kulungile. Futhi yingakho ngiyithanda, ngoba ingumlando futhi ingudaba olungafani nenye into futhi inezicelo eziningi ezahlukahlukene. Ngakho-ke akuyona ezolimo nje kuphela, ukuhambisana, izinkampani, kuthinta zonke lezo zinto futhi kuyathakazelisa.
Futhi enye yezinto ebengifuna ukuvele ngiyibuyisele emuva sikhulume ngokuthi eFlorida kwasekuqaleni yayiphansi kanjani i-THC bese singazi… Asinayo imbali engabhemi futhi eshintshiwe esimisweni sokugcina somthetho. Manje sinezimbali ezingabhemayo, futhi ngizokutshela amalayisense amanje awakwazi ukukhiqiza ngokushesha ngokwanele-
… Noma ngubani ubengabikezela isidingo sembali. Futhi wonke umuntu wajabula ngezinkawu nakho konke lokhu okunye, imbali-
Miggy, ukubikezele lokho?
Mfowethu, njengoba ubukhuluma ngezinombolo ngaphambili, konke lokhu kuyabhekeka. Imakethe ye-cannabis inkulu. Iqiniso lokuthi nina bafana laqala ngabakhiqizi abane, [inaudible 00:51:48] isiko lakho, noma yini, isipiliyoni sakho sabathengi. Kepha manje usunabantu abaningi, ukuhlukahluka okwengeziwe, isipiliyoni esithe xaxa. Izoshintsha ibe yinto yayo, eyayo… Kunomuntu okwazi ukwenza imicimbi. Kunomuntu ozoba… Njengakho konke ukuncengela kwenzeka sengathi ukhuluma nabathuthi nokuthi yini.
Lowo umqondo omuhle impela ukhona lapho ukuthi ukuqhekeka kuvuleke ngakho ukuze uthole wonke lawo mabhizinisi asizayo laphaya. Kepha ukhulume into ebengicabanga ukuthi iyathakazelisa, ngoba angisiyena ummeli waseFlorida. Angihlosile ukuyohlala ngivivinyile eFlorida bar. Sizobona ukuthi kwenzekani ngokuzayo. Kodwa-ke nina bafana nenza izichibiyelo kumthethosisekelo bese kuthi isishayamthetho siqale ukwenza izinguquko kulokho? Ngoba uthe ukuchibiyela uthe, "I-THC ephansi, ayikho imbali engabhemayo." Futhi manje asisusile i-THC ephansi nendawo yezimbali engabhemayo.
Ngakho-ke i-THC ephansi empeleni yayingumthetho ngaphambi kokuchibiyelwa komthethosisekelo. Ngemuva kwalokho kwaguqulwa ukuguqulwa komthethosisekelo futhi empeleni kwavumela umkhiqizo omkhulu we-THC. Umthethosisekelo wawuthule maqondana nokuthi ungabhema kepha wa ... Kodwa kwaba namacala afakwa enkantolo, empeleni, lapho umbusi efika, wakhipha umgomo wokuthi wayengumuntu ophikisana nentsangu engabhemi. Futhi babuyekeza leso simiso ukuze bavunyelwe.
Kube nempikiswano enkulu ngokubeka i-THC cap. Futhi kulokho engikuqondayo kule seshini elandelayo yomthetho, kukhona okunye ukusunduza ukuzama ukubeka i-THC cap kuhlelo lwethu lwensangu lwezokwelapha. Ngokusobala, yilokho okuhehayo ngomkhakha. Sihlala sizama ukuthuthuka, kepha futhi kufanele siqhubeke nokulwa ukuze sibambe isikhundla sethu. Ngakho-ke njengamanje bavunyelwe ukuba nensangu ephezulu yezokwelapha eTC eFlorida. But that [crosstalk 00:53:38] -
Ingabe nina bantu abafana nezibaya zevape? Ngoba lokhu kuyinto ... Kungumusa wemvelo ngokuphila kahle, kodwa cishe kwakungamaphesenti angama-80 ama-cannabinoids lapho kwakungu-
Yebo, sinamapeni e-vape. Esingenakho, ngakho-ke kuyathokozisa ukuthi lesi simiso sivumela ama-edibles, kepha uMnyango we-Ag noMnyango Wezempilo kumele basebenze ngokubambisana emithethweni edliwayo nemithetho edliwayo ayiphumanga. Ngakho-ke njengamanje eFlorida asinawo ama-edibles, engicabanga ukuthi… ngicabanga ukuthi abantu abaningi bakhetha i-edibles futhi ngeshwa ukuthi iziguli zethu azikwazi ukufinyelela ama-edibles. Enye into ethokozisayo eFlorida esisamile kuyo ukuthi abavumanga noma yiluphi uhlobo lwamalebhu wesithathu eFlorida.
Yebo, ngimele ama-Labs weSayensi ye-Green, okungenye yamalebhu wokuhlola uNdunankulu lapha eFlorida. Futhi bona, uMnyango wezeMpilo awutholakalanga ngokuzama ukubeka imithetho yokuhlolwa komuntu wesithathu. Manje bavele bakhipha umthetho ophuthumayo ongazange wamukelwe ozobe ubeka… Ngakho-ke njengamanje la ma-labs wesithathu wokuhlola, uMnyango Wezempilo ubavumela ukuthi baphathe insangu ngokwezifiso zakhe. Kayikho ilayisense elethwa ama-labs womuntu wesithathu, kumele nje athole inkontileka ne-MMTC, i-Medical Marijuana Treatment Center ukuze akwazi ukwenza lokho kuhlolwa, okwakha zonke izinhlobo zezinkinga. Futhi ngokweqiniso, manje eFlorida ukuhlolwa kuyazilawula, okusho ukuthi, bheka, lokhu ngamabhizinisi futhi uma kungenjalo kufanele bahlolwe okuthile, uma bengabiza-
[crosstalk 00:55:05] uzithobile, kufanele ubhekane ne-FAA. Kepha lokho kuza e-Illinois futhi lapho bangenayo… ngiqonde, basho izinto mayelana nokuhlolwa. Kunama-labs wokuhlola kepha awazange avulele ama-labs amasha wokuhlola futhi lokho kungaphezulu kwalelo bhizinisi elihlanganayo. Bazama ukukhawula ukugxila eWashington State, akunjalo?
Yebo. Yebo. Yebo, abanye abomthetho bazama ukucindezela i-bulshit ye-10% Bill. Ngakho-ke sethemba ukuthi, ngiqonde ukuthi, njengoba ushilo, ufika kude kakhulu kanti-ke kufanele ulwele lokho osunakho.
Ikakhulu [inaudible 00:55:37] indlela, ayeki. Iyabuya futhi kufana nokuthi, "Hawu, oh, uyayisebenzisa ngefomu elihlanganisiwe?" "Yebo."
Imibuzo engingayibuza kuphela ukuthi, "Ngani? Kungani kubalulekile nje ukuthi sinemingcele ngokushesha? ”
Ngikhombise [crosstalk 00:55:50] ukuthi lesi sitshalo sikuthinte kuphi? Ngiqonde ukuthi kukwenze kuwe?
Yebo. Hhayi, kwakukhona… Futhi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule balethe inqwaba yabantu, inqwaba yodokotela, iningi labadlali abavela ngaphandle kwesifundazwe ababephambene ne-cannabis futhi eTallahassee kwakukhona izikhulumi eziningi ezaz ukuphuma lapho. Futhi bebeba nezikhathi zokwaziswa nokulalelwa lapho laba dokotela bebekhuluma ngengozi yemikhawulo ephakeme ye-THC. Futhi ngizokutshela, kudale intukuthelo eningi nodokotela abaningi engisebenza nabo. Futhi uyazi, manje sebeqala ukubeka amaseshini wolwazi, bechaza ukuthi kungani kubalulekile ukuthi empeleni bakwazi ukufinyelela ku-THC ephakeme.
Futhi ngokweqiniso njengamanje, bekungaba yini… Uma bebengayenza okuthile lapho bexoshwa khona ngenani le-THC. Yini ethokozisayo ukuthi zonke izinhlobo zazo nazo zonke izinhlobo ze-bio ezikhula manje noma ingxenye enkulu yazo i-THC ephezulu, akunjalo? Ngakho-ke uma lowo mthetho wawungena, empeleni izinkampani zaseFlorida kwakuzodingeka ziphinde zenziwe futhi nazo zonke izingqinamba nazo zonke izinhlobo nakho konke abakwenzayo, okungadala inkinga yonke ukufinyelela kweziguli nazo zonke izinhlobo zezinkinga ezihlukile. Ngiyethemba ukuthi-
Kubukeka sengathi bazama ukunciphisa umkhawulo wamazinga we-THC.
Yiluphi uphahla oluphezulu abazama ukulilinganisela?
I-10% yilokho ababexoxa ngakho.
Cha, lokho kufana nokuthi, ukube besino-Ethan Russo, uDkt Russo emoyeni, ubengathi, “Cha, lelo yi-cannabis level amabili Chemovar.” Ngomqondo wokuthi yilawo alinganiselayo, ngoba unesilinganiso esingu-20 kuye kwelilodwa, okuvame ukuba yithambo lakho le-CBD hemp, njengezinto zakho zokuphakamisa. Futhi-ke unesilinganiso esiphikisanayo sokuthi ngesinye isikhathi siyikho nje i-THC futhi lokho kufana ne-Gorilla Glue yakho. Futhi-ke uma ukwenze njengokuphakamisa i-gorilla, khona-ke lokho kufanele kube ngaphezulu kwesilinganiso esilinganayo sokukodwa kwe-THC CBD. Futhi lezo zingaya ngaphezulu kwe-10%, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi ubuke imbali yakho. Futhi-ke uma uthola, kuzoba njengokusho ukuthi kuzofanela ukhethe wonke ama-apula lapho angavuthiwe.
Ngicabanga ukuthi yini, sizomane sibheme ngaphezulu. Uma ukhulume ngaphezulu nge-10% insangu, uzobe udla insangu eningi futhi mhlawumbe uzophakeme kakhulu. Kumele usebenzise imali eningi. Ngakho-ke kuzolimaza umthengi, isiguli okufanele sithenge insangu eyengeziwe ukuze sifinyelele-
Akukho khaya eligulayo elikhula eFlorida okwamanje, akunjalo?
Silungile. Ngakho-ke ukukhula ekhaya kuyinkinga enkulu. Ngokusobala abanamalayisense angama-22 ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazokuhlelela lokho. Futhi amalayisense angama-22-
Ezigulini noma zabantu abadala?
Angicabangi ukuthi amalayisense angama-22 azofuna ukuthi ukukhula ekhaya kwenzeke ngokuphelele.
Yebo, bheka, angazi. Kepha ekugcineni kosuku, la malayisense angama-22, njengoba ngishilo, eFlorida yimakethe enkulu. Lamalayisense angama-22 anemali eningi ngemuva kwawo kanti iningi labaphethe izikhundla eziseTallahassee njengamanje babhekelela bona. Ngakho-ke lokho kungenye yezingqinamba ezinkulu obekumele uzidlule ukuthi uzothola la malayisense angama-22 uchithe imali eningi ebamba imali yokugcina ikhaya likhula ngaphandle kwe- [inaudible 00:58:40]. Manje bheka, angazi, kungahle kube… angikaze ngikhulume naye, angifuni ukukhuluma egameni labo bonke abanamalayisense. Mhlawumbe ezinye zazo ziyayeseka. Kepha ngokombono obanzi, ngokunokwenzeka bazothatha uhlobo oluthile lwesimo ngokumelene nokukhulile ekhaya.
Uyazi, nina bafana nilahlekelwa yimali eningi kakhulu ngoba nisho ukuthi ezokuzijabulisa nazo zizohambela amadola ezokuvakasha. Ngoba njengamanje i-100% yakho yezokwelashwa iqinisekisiwe. Ngiqonde ukuthi, kungenzeka kungabi khona abakubiza ngokuthi ukuphambukisa, shiya umbuso, hhayi. Kodwa ngikuqinisekisa kakhulu ukuthi ukuthengwa kwezokwelashwa kuya kubahlali bendawo, iziguli ezingezona ezokwelapha. Ngakho-ke lapho nje sebethola lokho kuthenga kwezokwelapha ukuzijabulisa, noma ukuthenga okuzilibazisa, uzobe udonsa kuleya ndoda ebilokhu idonsa lokho ekubiza imakethe emnyama, kepha umngani wami ngubani owelapha. Awutholi imakethe kanjalo nezokuvakasha. Njengani nina enilahlile ezokuvakasha, yilokho eniphila ngakho.
O, lokho kuyahlanya. Ngiqonde ukuthi yingakho laba bantu bechitha imali eningi kwilayisense lapha, akunjalo? Ngiqonde, bheka, abakwenzi iziguli ezingama-300,000. Lokhu bakwenzela inani labantu abayizigidi ezingama-20 esinalo, kanye nakho konke ukuvakasha esinakho. Ngakho-ke laba bantu abayona… Asinabo abantu abasayina amasheke ngama- $ 50 ezigidi ngocezu lwephepha ngoba becabanga ukuthi bangafinyelela ezigulini ezingama-300,000. Lokhu bakwenza ngoba bayabona ukuthi uma ukuzijabulisa kwenzeka lapha eFlorida, kuzoba ithuba elihle kakhulu. Futhi ngokweqiniso, kuzoba amaqembu ezigebengu.
Kuzoba nokuningi, imali eningi okufanele yenziwe. Kuzoba nomncintiswano omningi. Uyazo ukuthi ngisho ukuthini? Bheka, ekugcineni kosuku, kufana nebhizinisi. Kufanele ukwazi ukuxoxa, ngitshela abantu abaningi, bafuna ukungena kulo mkhakha, bacabanga ukuthi yimali elula. Cha, kufana nanoma yiliphi elinye ibhizinisi. Kufanele ube uhlakaniphile. Kufanele usebenze nabantu abakwaziyo ukuthi benzani, basebenza nabameli abafanele, ama-accounting afanele, abantu abanezezimali abalungile, abatshalizimali abafanele, futhi kufanele uqhudelane. Njenganoma iliphi elinye ibhizinisi. Ayikho indlela elula yokwenza ibhande-
Kuhle, okungasibuyisela kokuthile esingakwazi ukukusonga lapha. Ngakho-ke uDustin, waseFlorida insangu ngo-2020, yini wena oyibonayo yenzeka?
Yebo, insangu yaseFlorida ngo-2020? Ngakho-ke manje sinalo leli cala leNkantolo Ephakeme elenzekayo. Siphinde sibe nalowo mthetho engakhuluma ngawo okusesishayamthetho. Angiboni ukuthi kudlula lowo mthetho. Ngiyethemba, uma kwenzeka lokho kungaba kuhle, sizoba nokuzijabulisa lapha. Angiboni ukuthi kudlula lowo mthetho. Angiboni isishayamthetho senza noma yini kuze kube inkantolo Ephakeme yaseFlorida ikhipha isinqumo ngaleli cala. Icala, yicala laseFlorida Grown. Leyo yinkampani efike necala futhi nginethemba lokuthi iNkantolo eNkulu izokhipha isinqumo kulezo zinyanga ezimbalwa ezizayo, kucatshangelwe ukuthi baqinisekisa izinkantolo eziphansi. Isishayamthetho cishe kuzodingeka sibuyele emuva esimisweni esikhethekile. Kuzofanele babuyekeze umthetho. Sonke siyayazi indlela inqubo yemithetho engathatha isikhathi eside.
Ngemuva kwalokho i-DoH kuzodingeka ukuthi ikhiphe imithetho emisha bese i-DoH kuzodingeka ukuthi idedele izinhlelo. Futhi bazobe sebeqala ukwamukela izicelo. Ngakho-ke, ngithemba kakhulu ukuthi singathola amalayisense athile akhishwe ngo-2020. Ngiyethemba kakhulu, singabaza ukuthi sizobe sinamalayisense akhishwe ngo-2020. Ngokungangabikhona ngeke kube namalayisense amanye akhishwe kuze kube lapho okungenani 2021 ngeshwa.
Kepha nginethemba, yingakho ngisebenza kakhulu kwezinye izifundazwe. Yingakho ngisebenze nawe kwezinye izinhlelo zokusebenza zase-Illinois. Ngihlela ukusebenza nawe kwezinye zalezi zinhlelo zokusebenza ezingeziwe esizitholile. Ngithole iqembu eNtshonalanga Virginia. Ngithole iqembu lomsebenzi eGeorgia engisebenza nalo. Kusebenza ngempela namaqembu ahlukahlukene ahlukahlukene ukubasiza ukuba bakwazi ukufinyelela. Futhi eziningi zazo yizinkampani zaseFlorida ezenzelwe ukuthi zifune ukwanda kwezinye izifundazwe futhi, ngakho.
Kepha ziningi izinto okufanele zenziwe. Ngiyethemba ukuthi, njengoba ngishilo, umthetho wokuhlolelwa ilebhu wesithathu, ngithemba ukuthi uzophuma. Ngiyethemba ukuthi kuzobe kunamalayisense amanye alawa ma-labs womuntu wesithathu wokuhlola ukuze… Futhi kuphinde futhi, uzungeleze umbuthano, kuphathelene nesiguli. Ngifuna isiguli sithole umkhiqizo omuhle kakhulu abangawuthola. Futhi uma lo mkhiqizo ungazithibuli ngokuqondene nokuhlolwa, kunezingozi eziningi zokuthi omunye umkhiqizo ufakwa emakethe yaseFlorida ungahloliwe ngokuphelele futhi-
Kuzothatha ukukhumbula okukodwa noma othile athole induku yangempela. [crosstalk 01:02:36] Ngakho-ke abantu bangakutholaphi umuntu?
Bangangithola, inkampani yami yezomthetho ngu: www.mrcannabislaw.com, leyo yi-M-Rcannabis law.com. Ungangilandela nakuyo yonke imithombo yezokuxhumana ku- #mrcannabislaw.
Kuyesabeka. Hhayi-ke, ngiyabonga kakhulu ngokuza embukisweni [crosstalk 01:02:55]. Futhi njengoba iFlorida yathuthukisa izinto ezintsha, sicela ubuye futhi wabelane ngayo…